1. Waxyaabaha ay ka kooban tahay ee dhadhan macaan iyo dhadhan fiican leh leh Waxaa loo samayn karaa saxan saxeexan oo qof kastaa jeclaan doono, sida spaghetti, salad, ama quraac qaaliya. Gaar ahaan dhamaadka sanadka Yaa guriga ku damaashaadaya Maanta waxaan haynaa qaab lagu sameeyo hilib doofaar iyadoo la adeegsanayo foornada si loogu daro seddex guri, sideed guri oo nadiif ah, macaan oo udgoon. Iyada oo leh liistada hodanka ku ah borotiinka iyo dufanka si aad ugu raaxaysato cimilada qabow kaliya isticmaal foornada fudud si aad u hesho cunto ama maaddooyin la socda koorsada weyn.
2. Dad badan ma oga wali !! Sababtoo ah hilib doofaar ayaa laga sameeyay caloosha doofaarka Laakiin waa lagu daray kadib markii la cusbaydeeyey oo laga tegey waqti. Loogu yeeray ama lagu daray cuntada ilaalinteeda si aad cunada u dheeraato. Kaliya biyaha, cusbada, sonkorta, sodium nitrite iyo sodium ascorbate ayaa ah geedi socodka ilaalinta ugu weyn ee loo isticmaalo soo saarista hilibka udugga. Xakamee heerkulka oo u daa ilaa uu ka gaarayo Qalabka loo isticmaalo dubista hilibka doofaarka • Hilib doofaar oo tayo sare leh • Saxanka hilibka doofaarka la dubay ee u adkeysanaya kuleylka • Foornada
3. Ku rid xaleefyada hilibka doofaarka saxan ama saxan dubista. Adoo kala bixinaya hilib doofaar si hilibka loo laalaabo ama loo dul dhigo gabal kale Si aad u hesho kuleylka saxanka oo dhan Waxaa lagu dhejin karaa dusha aluminium-aluminiumka loo isticmaalo karinta. Nadiifinta fudud
4. • Saxanka hilibka doofaarka ee diyaarsan ku rid foornada. Kadib heerkulka dhig 205 •. • Hilib doofaar ku kari dhinaca hore illaa 12-15 daqiiqo. • Hilibka doofaarka dhinaca kale u rog. Kadib ku rid foornada isla muddadaas
5. Hufan, qurux badan, banaanka u soo saar si aad u hagaajiso saxanka
6. Liis macaan oo hilib doofaar ku isticmaala foornada si sahal ah oo sahal ah ayaa loo cuni karaa iyada oo loo yaqaan 'appetizer madhan' sababtoo ah cusbada, saliida, dhadhanka yar ee macaan iyo urta qiiqa. Waa cunto fudud. Waxay saareen rooti, jiis iyo khudrad ay jecel yihiin waa Vanwich Bacon oo carruurtu waligood ilaabi doonin. Ku rid salad khudradeed kuna dar farmaajo, waa salad Caesar, saxan wadnahaaga u macaan. Ku daadi carbonagag spaghetti Waxay ku darsataa jilicsanaanta cunnooyinka ay jecel yihiin qof kasta inuu dhadhan fiican yeesho.Si kastaba ha noqotee, hilib doofaarku waa cunto dufan badan. Cunista qunyar socodka ayaa faa iido u leh jirka. Laakiin cunista badan Xaqiiqdii waxay yeelan doontaa saameyn xun Aynu diyaarsano suxuun macaan Sannadka qaabka, laga bilaabo hab fudud oo hilib doofaar ah oo lagu dubay, urta udgoonku way sii fideysaa, iyadoo ku dareysa diirimaad iyo xusuusyo fasax ah.